မီးတောက်များအကြောင်း….(အမျိုသမီးများ မဖတ်ရ.။) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မီးတောက်များအကြောင်း….(အမျိုသမီးများ မဖတ်ရ.။)
Posted by alinsett on Aug 7, 2011 in Copy/Paste | 36 comments
မနေ့ က ကျွန်တော်..စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့စကားလက်ဆုံ ကျခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ စစ်မှုထမ်းဟောင်းကြီးက အသက် 60 ကျော်ပါပြီ။
အခု ဆိုရင်တော့ ဘာသာရေးရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးမှုကြောင့်
အတော်လေးလည်း..တည်ငြိမ် ရင့် ကျက်နေပါပြီ။
သူက သူ့ ဘ၀ရဲ့အတိတ်ကို ပြန်မတွေးရဲ လောက်အောင်ကို
ကြောက်လန့် နေခဲ့ တာပါ….တဲ့ ။
“””” တောထဲတောင်ထဲ မှာ…. နှစ်နဲ့ ချီပြီး..နေလာခဲ့ ကြတဲ့ .
ယောက်ျား အစုအဖွဲ့ တစ်ခု အနေနဲ့ …. ဒီကိစ္စမျိုးကို ထိန်းဖို့ ဆိုတာ..အင်မတန် ခက်ပါတယ် ။ ကိုယ်တို့ အဖွဲ့ မှာ..ဒီ ကစ္စ မျိုးတွေကို…မကျူးလွန်တာ ဆိုလို့
တစ်ယောက် နှစ်ယောက် ပဲ ရှိတယ် ။
ကိုယ် အပါအ၀င်.. အခြားသူတော်တော်များများကတော့. ဆန္နနောက်ကိုလိုက်ပြီ.း…. ပျော်ပျော်ကြီး မှားပစ်လိုက်ကြတာပဲလေ…။ အဲဒီ တုန်းကတော့… လိုချင်တပ်မက်မှု ကို ပဲ..ရှေ့ တန်းတင်ခဲ့ တော့…မှားမှန်းလည်းမသိဘူး။ မတွေး မိခဲ့ ဘူးလေ။ ” “”
သူတို့ ကျူးလွန်တဲ့ အမှားဆိုတာကို သေချာ ရှင်းပြတော့ ကျွန်တော်… ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်…ထိတ်လန့် သွားမိတယ် ။
ယောကျာ်းတွေဟာ..sex ကိစ္စ အတွက်နဲ့ … အဲဒီလောက်ထိ…မိုက်မဲ သွားကြမယ်လို့ထင်မထားဘူးလေ။
ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းတွေတိုင်းကတော့ မှားတတ်ကြတာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ယောကျာ်းတစ်ယောက် ဟာ….sex ကိစ္စ မပြု လုပ်ပဲ… ဘယ်လောက်ကြာကြာနေနိုင်သလဲ….။
နေနိုင်လွန်းသူတွေလည်းရှိမယ်..။ ဒါပေမယ့်မနေနိုင်တဲ့ အခါ… မဆင်ခြင်နိုင်လောက်အောင် ပိုးစိုးပက်စက်..လုပ်ပစ်တတ်တာတော့ မကောင်းဘူး ထင်ပါရဲ့ ။
“””” ကိုယ်တို့ အားလုံး….ဟာ ဆန္န ကို လပေါင်း များ…စွာ…ချုပ်တည်း..ထားရတဲ့ ယောကျာ်းတွေလေ..။ အဲဒီလို အချိန်မှာ..တောထဲ မှာများ..မိန်းမတစ်ယောက် မတွေ့ လိုက်နဲ့ ။ တွေ့ ပြီ ဆိုတာနဲ့ အားလုံးက အတင်းဆွဲခေါ် ပြီး……. …………. ….. …………………………………………………….
အဲဒါ ……………………………… တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်နော်…။ရှောင်နိုင်သူ..ဆိုတာက 1 ယောက် 2ယောက် ပဲ..ရှိမယ် ။ ဒီလောက် ယောကျာ်းတွေ အများကြီး ရဲ့ အနိုင်ကျင့် တာကို ခံလိုက်ရတဲ့မိန်းမဟာ…ဘယ်လို ဖြစ်သွားမယ် ထင်လဲ…။ မြော့ ..သွားတာပေါ့။ သတိ ပါ လစ်သွားတာလေ..။ ပြီးပြီ ဆိုရင် အဲဒီမိန်းမကို ပစ်သတ်လိုက်တာပဲ..။
ချောက်ထဲ ကို ကန်ချ လိုက်တာပဲ…။ “””””
“”” များသောအားဖြင့် … ရန်သူ့ဘက်က မိန်းကလေးတွေ..နဲ့တောထဲ ကို ဟင်းသီ ဟင်းရွက် လာခူး ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေ..ပဲ ခံရတာလေ။ “””
ကြောက်စရာပဲ..။ ရမ္မက်မီး….ဟာ…စစ်မီးထက် ပို ကြောက်စရာကောင်း တာပဲ..။
မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ အသက်နဲ့ ..အရှက်…ကို တန်ဖို့း မထားနိုင်လောက်အောင်..၊.လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားခြင်း ကင်းမဲ့ သွားလောက်အောင်… ရမ္မက်မီးတွေ က တောက်လောင်တတ်ပါသလား….။.
စစ်မီတောက်တွေ ထက်…ပိုလောင်တတ်တဲ့ …ရမ္မက်မီးတွေ ကို မွှေးသူတွေ…အခုခေတ်မှာတော့… မရှိလောက်တော့ပါဘူးနော်။
………. အင်း မျှော်လင့်ရတာပါပဲလေ..။
( ကြမ်းတမ်းတဲ့ အရေးအသားပါခဲ့ ရင် ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းတွေ ကို ပြောပြတဲ့သူ… ပြောတဲ့အတိုင်းသာ ပြန်ရေးရရင်… ဒီထက် အဆများစွာ ညစ်ညမ်းသွားနိုင်ပါတယ် ။။ဒီအကြောင်းတွေ ကို သူပြောပြနေချိန်မှာ… ကျွန်တော် သူ့ ကို ရွံရှာ နေမိပါတယ် ။ လည်ပင်း ထ ညှစ် ချင် လောက်အောင်လည်း မုန်းမိပါတယ် ။
ကျူးလွန်သူတွေ ကို စိတ်ဆိုးမိတာကို ၀န်ခံပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းကို ချရေး ဖြစ်တာကတော့… ဒီ အဖြစ်တွေ မရှိပါစေနဲ့ တော့ လို့ဆန္န
ပြုချင်ရုံ…….သက်သက်( မနေနိုင်လွန်းလို့) ချရေးမိပါတယ် ။
ဘယ်သူ့ ကို မှ တိုက်ခိုက်စော်ကားလို စိတ် မရှိပါဘူး ဆိုတာလေးကိုတော့ လက်ခံပေးစေလိုပါတယ် ။)
အားလုံးကို ခင်မင်..လေးစားစွာ..ဖြင့် ….
လူဆိုတာ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ မကွာဘူး စဉ်းစားနိုင်တာနဲ့
မစဉ်းစားနိုင်တာပဲကွာတယ် ကျန်တာ အတူတူပဲ
အိပ်မယ် စားမယ် ကာမဆက်ရှက်မယ် အားလုံးတူတာ
မိန်းမက အားကောင်းမောင်သန်ပြီး ယောင်္ကျားလေးက
ပိန်ညှောင်ရိုးဆိုရင် အဲဒီကောင် လုပ်ရဲမလား
စစ်သားတွေဘက်က မနာပါနဲ့ kokothandar ။ စစ်ဗိုလ်တွေတောင် မိန်းမနောက်တစ်ယောက်
ယူရင် ရာထူးမတက်ဘူး လို့အမိန့်ချထားပေလို့ပါပဲ။ မိန်းမတွေကလည်း ကိုယ့်ယောက်ျား ရာထူး
မတက်မှာစိုးတာနဲ့ (တရားမ၀င်)မယားငယ်ထားတာကို မတိုင်ရဲကြဘူး။ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းလို့
သွားကြိုကြည့်ပါလား ။ ထမင်းခုနှစ်ရက် မစားရသလို မိန်းမ ငတ်နေတဲ့ ဗိုလ်လောင်းတွေရဲ့ မျက်
နှာတွေကို တွေ့ရလိမ့်မယ် ။ တစ်ရာမှာတစ်ယောက်လောက်တော့ မပါဘူးပေါ့ ။ စစ်သားဆို
ရင်တော့ ပြောမနေနဲ့တော့။ တောထဲကစစ်သားဆိုရင်တော့လေ … …. မတွေးရဲ။ ဒါတောင်
ဆက်ပြောစရာတွေ ရှိသေးတယ် မကောင်းတတ်လို့ မပြောတော့ပါဘူး။ …. အမလေး ကြောက်
တယ်နော် ။…… ….. သြော် အပုပ်နံ့ထွက်မှ အပုပ်ချလို့ရမှာ … အပုပ်ချမခံချင်ရင် အနံ့ မထွက်အောင်နေကြပေါ့ …. … အမလေး ကြောက်တယ် နော် ….
အမှန်တရားဆိုတာ တာဝန်ယူမှုလို့ ဆိုပါတယ် ၊
တာဝန်ယူသူရှိလို့ ဒီစကားမျိုးပြောနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လဲ ဟုတ်ချင်ရင်ဟုတ်မယ် ၊ ဟုတ်ချင်မှလဲ ဟုတ်မယ် ။
ကျုပ်လည်း ကြားဖူးတယ်။ စီနီယာအဖိုးကြီးတယောက် ပြောပြတာ။ သူ့အသိစစ်ဗိုလ်တွေ (မဆလခေတ်မှာ အကောင်ကြီးကြီး ဖြစ်ခဲ့သူများတောင်ပါတယ်) ပြန်ပြောပြတာတဲ့။ ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးမှာဆို ရွာထဲက ကရင်မတွေဆွဲပြီး သူ့ဆီလာပို့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းအရင်းလဲဖြစ်၊ မိန်းမလိုက်စားတာချင်းလည်းတူ၊ အရက်လည်းမူးနေလို့ ပြောပြတာတဲ့။ တခုတော့ ရှိတယ် စစ်သားတိုင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်နေတယ်လို့တော့ ယုံတယ်။
ကျနော်သိတဲ့ စစ်ဗိုလ်တယောက်ဆို ရှေ့တန်းမှာ ကရင်မလေးကို အခြားစစ်ဗိုလ်က ကြံစည်နေတာ ဝင်ကယ်တယ်။ နောက်တော့ သံယောဇဉ်ဖြစ်သွားပြီး အထက်အမိန့် နယ်ပြောင်းခိုင်းတာတောင် လက်မခံဘဲ ရာထူးအပြုတ်ခံပြီး လက်ထပ်လိုက်တယ်။ သိသလောက်က သူမရှိတော့ရင် ကောင်မလေးကို ထပ်ကြံစည်မှာကို စိတ်မချလို့တဲ့။ အဖေနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ပြောတာငယ်ငယ်က ကြားဖူးတာပါ။ ဇာတ်လမ်းအတိအကျတော့ မသိဘူး…။
ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ကြမယ်..။ နေရာတိုင်းတော ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ..။ တိုင်းရင်းသား သတင်းဌါနတွေမှာလည်း ဖတ်ရပါတယ်။ စစ်ကိုမုန်းအောင် လူမျိုးရေးတိုက်ကွက်တစ်ခုလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခံရသူတွေကလဲ တကယ်မဖြစ်ဘဲတော့ သတင်းမတင်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
ဒီလိုရှိတယ် ဟိုလိုရှိတယ် ဒီလိုလည်းဖြစ်ခြင်ဖြစ်မယ် ဟိုလိုလည်းဖြစ်ခြင်ဖြစ်မယ်
ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့စည်း စွဲပြီးပြောရင် ခင်ဗျားတို့ အာပတ်သင့်လိမ့်မယ်
ဆိုလိုတာက လောကီသားတွေလေ ( ရံခါ ငါ ပုထုဇဉ်ပါဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဦးချိုတတ်တာ ဆင်ခြင် )
မကောင်းသော ကြံစည်ခြင်းဆိုတာ ဘယ်ကင်းမလဲ
(ဒီကြားထဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး မျက်နှာပြောင်ပြီး ပြောတဲ့သတ္တဝါက ရှိသေးတယ်)
အကြံစည်ကို ပယ်တယ် စွန့်တယ် သုံးသပ်တယ်ဆိုတာကို ဘေးချိတ်လိုက် ( ကိုယ်နဲ့တန်တာကိုပြောရမှာ )
ဥပမာ ဆိုခဲ့ပြီးသလို ကိစ္စတွေက အခွင့်ရေးရရင် ရသလို လုပ်ကြတာဘဲ
လုပ်ပြီး အစဖျောက်ပြစ်မယ် ဒီလိုတစ်နည်း ( ဒီကောင်တွေကတော့ လူ့စာရင်းထည်းသိပ်ထည့်လို့မရဘူး )
တစ်ချို့ကြတော့လည်း ကိစ္စပြီးသွားတော့ ပြဿနာတက်မှာကြောက်လို့ မလုပ်ခြင်လုပ်ခြင်နဲ့လုပ်လိုက်တာ
တစ်ချို့ကြတော့ ကိုယ်လိုသလိုလုပ်ပြီး ကြေအေးစေခြင်တယ် ဒီလိုကတစ်နည်း
တစ်ချို့ကတော့ စားပြီးတော့စွဲသွားတယ် ( အသေခင်သွားတာပေါ့ဗျာ )
ဒါကတော့ သဂျီးတို့လိုမျိုးပေါ့ တစ်ခါပြီးအားမရလို့ အခြောက်လှမ်းပြီး လည်ပင်းမှာ ကြိုးလေးနဲ့ဆွဲထားတာ
( မိန်းကလေးတွေတော့ ဝင်မမဖတ်လောက်ပါဘူးနော် )
အင်း .. ဟုတ်တယ် မဖတ်လောက်ဘူး ဆက်ပြော ;)
ကိုအောင်ပုပြောမှ ရှင်းသွားတာပဲဗျာ…မိန်းကလေးတွေ ၀င်ဖတ်မှာတော့သေချာတယ်ဗျ လောင်းရဲတယ်… မိန်းကလေးတွေရဲ့သဘာဝကိုမှ.. သေသေချာချာ ချိန်ပြီးတုတ်နဲ့ ထိုးထားသလို ဘာတဲ့ “အမျိုးသမီး မဖတ်ရ” ဆိုပြီးလုပ်ထားမှတော့.. သေသေချာချာကိုဖတ်မှာ ဟဲဟဲ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှတော့ ၀င်မန်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျို့ …
အလင်းဆက် ကိုပြောတဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းက သံဝေဂရတဲ့ ပုံစံနဲ့ပြောတာ၊ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြတဲ့ စစ်သားလူထွက်က အားပါးတရကိုပြောခဲ့တာ၊ ကျွန်တော်ဆို လက်ကိုယားနေတာပဲ။
ပုဂ္ဂိုလ် စွဲတော့ မထားပါဘူး။ အားလုံးက မငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ဥပဒေမစိုးမိုးခြင်းရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ရတာပါ။
မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်က သေးပြီး လိင်စိတ်က ကြီးနေတဲ့ မယဉ်ကျေးသောသူများမှာ ဖြစ်ကြတဲ့ ရက်စက် ရိုင်းစိုင်းမှုပါပဲ။ ပြောရရင် မြန်မာတွေက ရိုင်းနေသေး၊ နိမ့်ကျနေသေးတာကိုးဗျ။ လူရိုင်းတွေလို ပြုမူနေကြတုန်း ဖြစ်နေတာပေါ့။
ဒီကောင်တွေ ဒီကိစ္စသရမ်းတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ … ကွန်ဒုံးလည်း ဆောင်ပုံမရကြဘူး .. … တယောက်က ရောဂါပိုး တယောက်ဆီကူး နဲ့ …. ကြာရင် ဒုက္ခများလာလိမ့်မယ် … မျိုးပါသုန်းနိုင်တဲ့ အဖြစ် မသိကြဘူးပဲ ။
ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းအဆိုး ဆိုတာ ဒွန့်တွဲနေတတ်တာ ပဲလေ..။
ငါ​ ၊သူ​တ​ပါး​ ၊ယော​က်ျား​ ၊ မိ​န်းမ၊။ ငရဲမကြောက် ရဲရဲ တောက် ။ရေပါလာတာဘဲ လိုချင်တာ၊ရေဘူးပေါက်တာမသိ တဲ့ ဒီတော့ ——–
ရန်သူကို သစ်ပင်မှာတုပ်ပြီး စစ်ဆေးတဲ့အခါ ဗိုက်ကို ဓားမြှောင်နဲ့မွှေ့၊ ထွက်ကျလာတဲ့အူကို ပြုတ်စား၊ အဲဒါ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ အခု အလင်းစက်ပြောသလောက်ကတော့ အပျော့စားလေးရှိပါသေး။
လူဆိုတာ သေဖို့အတွက် မွေးဖွားလာတာပါ..
ပြောရ ပြောရတာ နည်းနည်းတော့ လန့်သလိုပဲ
ဒီထဲမှာက ရခိုင်ပြည်က ရောင်းရင်းတွေက အများသား
ကိုယ်လည်း ကာယကံရှင်တွေဆီက မသိတော့ သိပ်တော့မပြောရဲဘူးဗျ
ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့လူတွေ ပြောပြချက်အရ နည်းနည်းတော့ ဖောက်သည်ချလိုက်မယ် …
အဲသည်ဘက်က မွတ်စ်ကောင်မလေးတွေ (မွတ်စ်မ လည်းတွေဆိုတော့ ခပ်ချောချောလေးတွေ ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ ဒီမှာတော့ မွတ်စ်မ လေးတွေက ရှယ်လှသကိုး .. တရားတော့ မတရားဘူးဗျာ လူချင်းတူတူကို သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်ခွင့်ရချင်ရခဲ့မယ် ဟိုလိုဒီလို ဖြစ်ဖို့တော့ ၁၀၀ မှာ ၁ ယောက်တောင် မလွယ်ပါလားဗျ) တောထဲ ထင်းကောက်ရင်း တောထဲမှာ စစ်တပ်နဲ့ တိုးရင်တော့ ထွက်ပြေးကြကုန်ရော ထွက်ပြေးတော့ လူတွေ ကွဲကုန်ကြရောတဲ့ အဲသည်မှာ မပြေးနိုင်ရင် ထမိန်ခေါင်းစွပ်ပြီး ခြုံပုတ်ထဲကို ခေါင်းစိုက်ထားလိုက်ကြရောတဲ့ … ဟိုလူတွေကလည်း မျက်နှာက အဓိကမှ မဟုတ်တာ .. သူတို့ကိစ္စပြီးရင် ပြန်ထွက်သွားကြရောတဲ့ … အဲသလို အဲသလို ဒါကတော့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များဆီကတဲ့ … အခုတော့ မသိပေါင်ဗျာ ပြောပြတဲ့ လူတောင် ပင်စင်တွေယူကုန်တာ ကြာပြီဆိုတော့လေ ………….
ဟုတ်တယ် တဏှာရာဂ များတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ…
ဏှာထနေတဲ့ယောက်ျား စိတ်များမထိန်းနိုင်လို့ကတော့ ဝါးဆစ်ပေါက်တောင် အလွတ်ပေးမယ့်အမျိုးမဟုတ်ဖူး… (မိန်းကလေးများမဖတ်ရဆိုတဲ့အတွက် မိန်းကလေးတွေဝင်မဖတ်ဖူးလို့ ယုံကြည်လို့ နည်းနည်းကြမ်းလိုက်ပြီ..) အဲ့ဒါလဲ အငြိမ်းစားကြီးတစ်ယောက်က ရှေ့တန်းတုန်းက သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြတာ ကြားဖူးတယ်… ကြားကြားချင်း ဘယ့်နှယ့်လူပါလိမ့်.. အဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်ရလားဆိုပြီးရွံမိသေးတယ်.. နောက်တော့တွေးမိတယ် ကြက်သီးထစရာကြီး… ရှတတနဲ့နေမှာပဲ… အဟီး….
ကောင်းပါတယ်။ခုချိန်ထိတော့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ထားတဲ့ မုဒိမ်းမှုတွေ၊
ရွာတွေကို ဖျက်ဆီပြစ်တာတွေ ဟာ အိမ်မက်မဟုတ်သလို၊လိမ်ဆင်တွေ
လဲမဟုတ်ပါဘူး။တနေ့ တော့ နင်တို့ စစ်သားဆိုးတွေ အတွဲလိုက် ကြိုးစင်
သွားရမှာ မပူပါနဲ့ တော့။
ဖြေးဖြေး ပြောကြပါ..ကိုယ့်လူတို့ ရယ်..။
ကိုယ်လည်း ရေးသာရေးရတယ် ခပ်လန့်လန့်ရယ်။
တော်ကြာမှန်တာပြောလို့ …..ဇာဂနာ လမ်းလိုက်နေရဦးမယ်။
ကိုအလင်းစက်ရေ….အမှန်ပြောလို့ကိုသူရလမ်းလိုက်ရမယ်ဆိုလဲ လိုက်ဖို့ အသင့်ပါဗျာ။
ကျနော်က မကြောက်မလန့် ပါ ကိုယ့်နာမည်အရင်းနဲ့ ရေးနေတာပါ။အမှန်တရားကို မြတ်နိုးဖို့ 
ကျနော့် မိဘတွေက သင်ခဲ့သလို အမှန်ကိုဘဲ ပြောတတ်အောင် မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံနေထိုင်
အဲဒီ လီးအာသာဖြေတဲ့ ကောင်တွေလည်း ပြည်သူထဲကနေ လာတာနော်
အလကားရရင် ဆင် အကြွေးဝယ် ဆိုတာက ဒို့ မြန်မာတွေ အတွက်
အလကားရတယ်ဆိုတာက လိုလိုလားလား ပေးလို့အလကားရတာလား
ဘယ်လိုပဲရရ မြန်မာပြည်က အကောင်တွေ အတော်များများကလဲ နှမ အမ အရင်းကလွဲလို့ 
၀မ်းကွဲတောင် ရရင် ချမဲ့ ကောင်တွေ
အဓိက က ပြည်သူ့ နီတိ
အဲဒီ ပြည်သူ့ နီတိ ဆိုတာကို မသိသေးသမျှ လီးအယားဖြေနေကြမှာပဲ
ကိုယ်သာ သူများ နှမကို ချချင်ပြီး ကိုယ့်နှမကျတော့ လက်နဲ့ အုပ်ထားချင်တဲ့ အကောင်တွေ
အောင်ဘုစကားငှားပြောရရင် လီးလိုမှိုလို လုပ်မနေနဲ့ 
ကိုယ့်မျိုးဆက် အသစ်ကိုသာ အဲလို မဖြစ်အောင် သွန်သင်
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေး ပြန် မန့် ပေးပါမယ် ။
အဲဒီလို မုဒိမ့်ကျင့်တဲ့ ပြည်သူ့စစ်သား ပြည်သူ့ တပ်မတော် ဆိုတဲ့ လူတွေဟာ
ပြည်သူလူထု ပြည်သူပြည်သား မိဖများကနေ မွေးဖွားလာသူတွေပါ ။
အလကားရရင် ဆင် အကြွေးဝယ် ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ အတွက်ပါ ။
ဘယ်လိုပဲရရ မြန်မာပြည်က ပြည်သူပြည်သားတွေ အတော်များများကလဲ နှမ အမ
အရင်းကလွဲလို့မိမိရဲ့နှမ ၊ အမ ၀မ်းကွဲတောင် ရရင် ရသလိုလုပ်ချင်တဲ့ လူစားမျိုးတွေ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပါ ။
ဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာ ။
အဲဒီ ပြည်သူ့ နီတိ ဆိုတာကို မသိသေးသမျှ ဒီလို မုဒိမ်းမှုတွေ အနိုင်ကျင့်မှုတွေရှိနေမှာပဲ ။
ကိုယ်သာ သူများ နှမကို စော်ကားချင်ပြီး ကိုယ့်နှမကျတော့ ကာကွယ်ချင်တဲ့ လူတွေ
အောင်ဘုစကားငှားပြောရရင် ခွေးတူ ၀က်တူ လို လုပ်မနေနဲ့ 
ကိုယ့်မျိုးဆက် အသစ်ကိုသာ အဲလို မဖြစ်အောင် သွန်သင်ပါ ။
ဒါနဲ့စကား မစပ် ……ပုတ်သင်ညို တံဆိပ်ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဆိုတာကို
သိကြပါရဲ့ လား ။
ဒီအထဲ.. စစ်သားတွေနဲ့.. မိန်းမတွေက.. တရားခံ/သားကောင်ဖြစ်သွားကြတာပါ..။
ဒါတွေပျောက်ချင်ရင်.. ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် လုပ်နိုင်မှဖြစ်မှာ…
From the systematic rape of women in Bosnia, to an estimated 200,000 women raped during the battle for Bangladeshi independence in 1971, to Japanese rapes during the 1937 occupation of Nanking – the past century offers too many examples.
“In Bosnia systematic rape was used as part of the strategy of ethnic cleansing,” it said.
“Women were raped so they could give birth toaSerbian baby.”
The same tactic was used ina“very strategic attack” by state-backed Pakistani troops during the fight for Bangladesh’s independence in 1971, Ms Sahgal said.
South Korean former “comfort women” holdaweekly anti-Japan rally in Seoul
Ex-“comfort women” in Korea holdaweekly rally demanding reparations
“They were saying ‘we will make you breed Punjabi children’,” she said, with the aim of weakening the integrity of the opposing ethnic group.
Amnesty this year accused the pro-government Janjaweed militias in Sudan’s Darfur region of using mass rape in order to punish, humiliate and control non-Arab groups.
In Colombia, rival groups rape, mutilate and kill women and girls in order to impose “punitive codes of conduct on entire towns and villages”, so strengthening their control.
Women’s lives and their bodies have been the unacknowledged casualties of war for too long
Amnesty’s Lives Blown Apart report
Representatives of the 200,000 “comfort women” forcibly drafted into military sexual slavery by Japan from 1928 until the end of World War II are still fighting for restitution.
Far from colluding, women from Korea, China, Taiwan, the Philippines, Malaysia and East Timor were “severely coerced” into prostitution, says Ms Sahgal.
And whetherawoman is raped at gunpoint or trafficked into sexual slavery by an occupying force, the sexual abuse will shape not just her own but her community’s future for years to come.
“Survivors face emotional torment, psychological damage, physical injuries, disease, social ostracism and many other consequences that can devastate their lives,” says Amnesty.
“Women’s lives and their bodies have been the unacknowledged casualties of war for too long.”
Displaced women from Darfur (17 November 2007)Last night, I heard this report on the BBC World Service about the rape of women and girls in the conflict in Darfur, based on this study by Human Rights Watch. The BBC says that although rape has beenatool of warfare throughout this conflict, the patterns have changed–it’s not just the Janjaweed, anymore. “Women and girls (photo, right) are now as likely to be assaulted in periods of calm as during attacks on their villages and towns. Government soldiers, militiamen, and rebel fighters [are] also targeting women on the fringes of camps for displaced people spread around the region.” We saw this in the wars in the Balkans in the 1990s–although prominent feminist legal theorist Catherine Mackinnon was important in drawing attention to the use of rape and forced pregnancy by Serb soldiers in the wars in Bosnia-Herzegovina and Croatia, this 1996 book by Beverly Allen looks like the comprehensive study of that human rights disaster. So, as in Europe, Iraq, and Afghanistan, one of the most important lessons we can learn about modern warfare is that women’s rights and safety are dramatically degraded in war zones, and that women’s rights are never the priorities of the new governments that rise in the wake of these wars.
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီလိုအဖြစ်တွေက မရှိသင့်တော့ပါဘူး။ခုနောက်ပိုင်းတော့ ရာထူးအဆင့်လိုက် သေချာအုပ်ချုပ်လာပြီလို့တော့ ကြားရတာပဲ။မရှိလောက်တော့ဘူး ထင်ရတာပဲဗျ။
တတ်နိုင်တာကတော့ အဲဒီလိုအဖြစ်တွေ မရှိပါစေနဲ့တော့လို့ဘဲ ဆုတောင်းရတာပဲလေ။
အင်း။ nigimi77 ပြောသွားတာကို ဖတ်ရတာ တော်တော်..လန့် သွားပါတယ် ။
လန့်ရုံတင်မက လန် ..ပါသွားပါတယ် ။
ဖြေးဖြေးပြောကြပါဗျို့ ။ တော်ကြာ…. …. ….. …..
ကဲ..မှန်တာပြောကြတာပဲ.နော်။ ဘယ်လိုပြောပြော မှန်နေဖို့ က အဓိကပဲ.။ ဆက်ပြီးတော့ ဖြေးဖြေးပြောကြပါဦး။
စကားလုံး သုံး နှုန်းမှု.ကို သေချာစဉ်းစားပြိးမှ ဝေဖန်ကြပါ..လို့ တောင်းပန်ပါတယ် ။
လှိုင်သား nigimi77 ပြောချက်တွေကတော့လန်ထွက်နေတာပဲ
တကယ်တမ်း…နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကြုံရမယ်ဆိုရင်…(ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်..နားလည်တဲ့လူကလွဲပီး) ကြူးလွန်ကြမယ်လို့ထင်တယ်…